Lokhu okulandelayo izivivinyo ezihlobene nokuxhumana. Lezi zivivinyo zizokusiza uqonde futhi usebenzise lezi zimiso zokuxhumana empilweni.
Qaphela: Ezinye izivivinyo kumele zenziwe nomunye umuntu. Uma ungenaye umuntu ozosebenzisana naye manje, sikukhuthaza ukuthi uqhubekele esigabeni esilandelayo sesifundo. Sizokukhumbuza kamuva ukuthi uthole umuntu ozoqedela isivivinyo naye ngaleso sikhathi.
Ngokulandelayo uzobe wenza zokuxhumana training drills nomunye umuntu. Yenza okulandelayo:
Thola umuntu ozosebenza naye njengozakwenu ukuze nizokwazi ukuqondana ngokuzivivinya.
Cela umlingani wakho afunde zonke drills.
Nquma ukuthi ngubani kini i-coach kuqala.
Bese uqala i-TR yokuqala!
Yenza i-drill — Training 0: Iba Khona
Ungalanda uphinde uprinte ikhophi le-drill ukuze ube nalo ukuze ulinikeze lapho uzokwenza khona.
Drill sheet » Training 0: Yiba Lapho
DOWNLOADA I-PDF »
Yenza i-drill — Training 0: Ukubhekana
Drill sheet » Training 0: Ukubhekana
Yenza i-drill — Training 1: Ukuletha UkuXhumana
Drill sheet » Training 1: Ukuhambisa UkuXhumana
Yenza i-drill — Training 2: Ama-Acknowledgments
Drill sheet » Training 2: Ama-acknowledgments
Incwadi » “Alice’s Adventures in Wonderland”
Yenza i-drill — Training 3: Umbuzo Ophindaphindwayo
Drill sheet » Training 3: Umbuzo Ophindaphindayo
Yenza i-drill — Training 4: Ama-Originations
Drill sheet » Training 4: Ama-Originations
Okunamathiselwe » Originations Sheet